Xil-ka-qaadis lagu sameeyay taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadaq Joon iyo mid cusub oo la magacaabay – Calanka.com
War qoraal ah oo goor-dhow kasoo baxay xafiiska taliyaha booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan (Saadaq John) kadib markii uu dhawaaqay in la hakiyay kulankii baarlamaanka.
Taliyahii booliska gobolka Banaadir ayaa ku dhaawaqay in la joojiyay kulankii la filayay inay yeeshaan xildhibaanada baarlaamaanka Soomaaliya sababo amni dartood.
Saadaq Cumar Xasan ayaa sheegay in sababta loo hakiyay kulanka baarlamaanka ay tahay in wax rabshado ah ama boob uusan ka dhicin magaalada Muqdisho.
“Waxaan maanta hakinay kulankii ay lahaayeen..waxaa loo baahan yahay in wax boob ah in aysan dhicin, Isfahan siyaasadeed la gaaro”
Aqalka Baarlamaanka waxaa tegay tiro yar oo kamid ah xildhibaanada iyadoo maanta lagu waday inay ka hadlaan khilaafka arrimaha doorashada.
Warqad ka soo baxday Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, ayaa lagu sheegay in xilkii laga qaaday Taliyihii booliska gobolka Banaadir, Saadaq Joon, loona magacaabay Farxaan Maxamuud Qaaroole oo ah nin dhallinyaro ah.
Farxaan Qaaroole wuxuu ahaa Taliyihii ciidamada Haramacad oo u badan dhallinyaro.
Muddadii uu taliyaha u ahaa Haramacad, waxay fuliyeen howlgallo kala duwan. Midkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa dagaalkii Beledxaawo ay kula galeen ciidan uu hoggaaminayay cabdirashiid Janan oo hadda dowladda la heshiiyay.
Waxay horey uga howlgaleen Dhuusamareeb oo ay kula dagaallameen ciidamadii Ahlu Sunna. Sidoo kale waxay si joogto ah uga howlgalaan magaalada Muqdisho.